Wararka Warshadaha |
Naga soo wac: + 86-13505845336
Maaskaro la tuuri karo
Dhalaal-dhalaal aan la aqoon
Maxay yihiin taxadarka loo leeyahay xidhashada maaskaro
waxaa maamula 20-07-13
Marka lagu daro dhinacyada hore iyo gadaal ee aan kor ku soo sheegnay, iyo inta jeer ee la beddelayo, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelatid xidhitaanka waji-xidhka: Gacmaha iska dhaq ka hor inta aadan gashan weji-xidhka, iskuday inaad ka fogaato taabashada gacmahaaga maaskaro gudaha; Ha xirin khalad, wanaag iyo xumaan, hana deeq…
Imisa jeer ayaad xirtaa maaskaro oo aad beddesho
Haddii maaskarada waxyeello ama wasakhoobo, waa in sida ugu dhakhsaha badan loo beddelaa. Haddii aan la wasakheynin, kaliya inaad ka cayaarto kaalin difaac meelaha caamka ah ee dadweynaha, oo aan lagu dhigin goobaha caafimaadka: Maqaarrada daawada lagu tuuri karo: "Ka saar taabashada wejiga, sanka iyo sanka = hal mar ka badan", iska tuur ka dib ...
Sida loo kala sooco wejiga hore iyo kan dambe ee maaskaro
Maaskaro ayaa loo baahan yahay wakhti kasta inta lagu jiro cudurka faafa, markaa sidee baad u kala soocdaa hore iyo gadaal ee waji xidhka iyo waji-bixinnada cad ee la tuuri karo? Marka xigta waxaan ku tusayaa jaleec Si aad u kala garato xagga hore iyo xagga dambe ee waji-xidhyada (1) Marka laga eego dhinaca midabka, dhinaca mugdiga ah guud ahaanba waa f ...
Maxa qaban kara maaskaro la tuuri karo
Marka hore: xoq weelka miiska. Guud ahaan marka lagu hadlayo, maaskaaradan waxay ka kooban tahay maro aan laga tolan. Maaddadan waxaa laga yaabaa inaysan u xoog badnayn sida suufka iyo walxaha kale, laakiin maadadan waxay leedahay labo faa iido: biyo ma nuugo mana ahan mid aad u adag. Looxa loogu talo galay biyo qodista badan isla markaana timaha u daadiya ...
Sanadka 2019, waxaan u sameynay labo laamood dalka Vietnam sidii loo balaarin lahaa ganacsiga shirkada. Mid wuxuu ku yaal Hanoi oo ah caasimada Vietnam, iyo meesha kale ee ku taal magaalada Ho Chi Minh halkaas oo ah xarunta dhaqaalaha iyo ganacsiga ee Vietnam. Waxaan kireynay qaar ka mid ah shaqaalaha maxalliga ah iyo qaar ka mid ah shaqaalaha Shiinaha sidii pr ...
Qaarkood waxay kugula talinayaan isticmaalka maaskaro la isticmaali karo
waxaa maamula 20-07-10
1. Isticmaal maaskaro la isticmaali karo si aad ugu daboosho sanka iyo afka, yareeyso inta u dhexeysa wejiga iyo maaskaarka. 2. Iska ilaali inaad taabato maaskaro markii aad isticmaaleysid. 3. Beddel maaskaro markii ay qoyan tahay ama wasakh tahay. 4. Beddel maaskaro 2tiiba 4tii saacadoodba mar. 5. Nadiifi gacmahaaga markii aad ka saareyso maaskaro la tuuri karo. 6. Samee ...
Su'aalaha ku saabsan badeecadaheena ama qiimeyahankeena, fadlan noogu soo dir emaylkaaga annagana waan la soo xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood.weydiin
warshadaha aagga tangqiaotang zhang jiagang magaalada china